Mike Tyson VS Roy Jones: onye ga - emeri | TeraNews.net
Mike Tyson VS Roy Jones: onye ga-emeri
na-ede akwụkwọ Kravetz Pavel E bipụtara 27.11.2020
Ndi oru nta akuko nwetara ihe omuma banyere ugwo nke ndi uku ndi egwu uwa ndi choro ka ha zoputa. Mike Tyson VS Roy Jones - ma ọ bụrụ na, onye ọzọ amaghị. Maka ọgụ a, Mike Tyson ga-enweta nde dọla iri nke America, Roy Jones ga-enwetakwa naanị $ 10. Mana ndị nhazi ahụ kwere ndị na-alụ ọgụ nkwa pasent nke Pay-per-view (mgbasa ozi vidiyo nke ọgụ ahụ).
Dabere na ndị nhazi, ọgụ a ga-abụ ọgụ ngosi, ebe ndị ọgụ abụọ ahụ kwụsịrị ọrụ ha. Naanị nke a siri ike ikwere, ebe ọ bụ na ndị mmegide abụọ anaghị eji mmeri. A na-eme atụmatụ ijide 8 agba nke 2 nkeji. Ọgụ a ga-eme n’abalị nke ọnwa Nọvemba 28-29, 2020 na Los Angeles.
Mike Tyson. Afọ - afọ 54. Ọrụ agwụchara na June 11, 2005. E meriri agha 58 (mmeri 50, mmeri 44 site na knockout).
Roy Jones Jr. Afọ - 51 afọ. Emechara ya ọrụ na February 8, 2018. Lụrụ ọgụ 75 (mmeri 66, 47 n'ime ha site knockout).
Ikpe ikpe site na ọnụ ọgụgụ nke mmeri na-enweta mmeri, ọgụ Mike Tyson VS Roy Jones na-ekwe nkwa ịbụ ọmarịcha. Makinghọrọ nhọrọ maka otu n’ime ndị ọkpọ ahụ na-esiri anyị ezigbo ike. Mike na Roy bụ ezigbo ndị egwuregwu aha ha ga-adịgide ruo mgbe ebighi ebi n'akụkọ ihe mere eme nke mmadụ.
Ọ na-anọgide na-echere duel. Ọ ga-amasị m ikwere na mgbasa ozi n'ịntanetị nke agha a ga-adị na mba niile. Ya mere na ndi n'èzí America nwekwara ike ihu nnukwu asọmpi a na nnukwu ha 4K TV.
Huawei Watch 3 na Watch GT 3 na-ekwe nkwa nnukwu smartwatches
Ndi OnePlus Band bu onye osompi nke Xiaomi Mi Band 5?
Velomobile Twike 5 - osooso ruo 200 km kwa awa
Onyinye kachasị mma maka onye na-agba ígwè - WEST BIKING
Amazfit GTS 2e na GTR 2e - smartwatches maka $ 115
Oximeter Pulse na Obi Uche Nyocha C101H1
Google TV na-abịa - gam akporo TV Fans na-ewe iwe
iMac Kere Apple Pro Ngosipụta XDR
Kedu ihe ga - abụ iPhone 13 - eziokwu na akụkọ ifo
Beelink GT-KING PRO 2021 nwere Wi-Fi 6
Batman: Zoe Kravitz dị ka nwanyị nwanyị
"Nkeji isii ruo etiti abalị" - ihe nkedo
LG XBOOM Go PL7 - obere okwu
18 ọcha Porsche 911 GT3 2015 afọ na-enweghị ọsọ